Basaaskii reer Masar ee badbaadiyey Yuhuuda. - Land Of Punt
Qoraa yuhuudi ah oo lagu magacaabo Yuri Bar-Joseph ayaa daaha ka qaaday mid kamida dhacdooyiinka basaasnimo ee taariikhda colaada Carabta iyo Yuhuuda.
Muda hada laga joogo 43 sano kuna began sanadkii 1973 , markii uu dhamaaday dagaalkii dalalka Masar iyo Suuria ay la galeen Isreal , ayaa qoraa yuhuudi ahi wuxuu banaanka soo dhigay dhacdo xiisa badan oo muujinaysa kiisas ka dhex dhacay taariikhda sirdoonka waqtiyadii ay socdeen dagaaladii khilaafada carabta iyo Isreal oo iminka laga doodo hadal haynteeduna aanay dhamaan.
Qoraaga oo lagu magacaaabo Yuri Bar-Joseph ayaa bug uu soo saaray waxa uu ka sheekeeyey dhacdo uu sameeyey basaas caan ka ahaa sirdoonkii Isreal iyo Masar oo labadoodaba u shaqayn jiray gaar ahaan intii lagu guda jiray dagaalkii la odhan jiray YOM KIPPUR , kaasoo saamayn kulahaa awooda iyo go,aan qaadashada Masar, ka hor iyo kadib marklii uu dhacay dagaalkii uu ka digay nin taariikhda jiil ka jiil laga sheekayn doono, Kaasoo faa,iido unoqday Isreal.
Basaaskan waxa lagu magacabaa Ashraf Marwan , asal ahaan waxa uu kasoo jeedaa dalka Masar , sanadkii 2007 ayuu kasoo dhacay guri dabaq ahaa ku yaalay magaalada London uu deganaa ilaa hadana sababta keentay dhimashadiina iyo inuu dabaqaasi ka dhaco waa la garan la’yahay.
Hadii aynu dib u milicsano taariikhdii uu ka tegay ee dunida ka yaabisay waxay ahayd inuu ahaa sababta Isreal guusha uga keentay dagaalkii sanandkii 1973, xili Isreal ay quus ku dhowayd oo Suuriya iyo Masar ay weerar laba geesood ah ay ku qaadeen maamulka Isreal.
Buuga uu qoray ninkan yuhuudiga ahi waxa uu ku xusay in Ashraf Marwan uu ahaa geesi hayada makhaabaraadka Yuhuuda ka tirsanaa kaasoo guul usoo hooyey, Waxa kale uu sheegay in dalka uu kasoo jeedo ee Masar aanu khiyaanoole ka ahayn sida uu ku dooday ninka qoraaga ah ee buuga qoray, waana nin siro culus ka iibiyey cadawgii waqtigaa dagaalku uu socday.
Ashraf Marwan waxa magaciisa afgarashadu ahaa ama magaciisa sirta ah ‘ANGEL’ , waxa uu 24 saacadood kahor inta aanay dagaalka soo qaadin ciidamadu carabtu uu war digniina u diray hadayaha sirdoonka Yuhuuda iyo milatery ga yuhuuda.
Wuxu ahaa nin macluumaad badan ka hayey milateriga Masar iyo qorshayaasha dagaalka iyo hogaamiyayaasha ciidamada kala duwan waana ta keentay in Isreal guulweyn gaadho iyadoo jebisay ciidankii carabta ee isbahaysanayey.
Qoraagan u dhashay Isreal waxa uu inta badan iskudayey inuu su’aalo badan uu keeno taasoo ahayd waxa kaliifay qorista buuga oo ku sabsanayd qisada basaaska u dhashay dalka Masar ee la odhan jiray Ashraf Marwan .
Waxa kale oo uu eegay sababta hayadaha sirdoonka yuhuuda ee MOSSAD ay u aamintay basaaskan reer Masar, hadana ay usiin jirtay $ 50,000 ilaa $ 100,000 wakhti kasta oo uu macluumad ukeeno bishiiba mar ama laba jeer, taasoo ay la socdoon hadyado iyo alaabooyin qaali ah oo isaga lagu abaal marinayey.
Waxay jawaabtu nooqotay in ninkii Marwan xogta siinayey uu rabay inuu macluumaad baaxadle helo maadaama wakhtigu ku adkaa Isreal , cabsi badanina ay ka haysay inay dhulka lasimaan Masar iyo Suuriya . Taasi waxay keentay in 24 saacadood ka hor inta aan la weerarin ay helaan macluumaad dheeri ah.
Waxayna su’aashu noqotay maxay tahay waxa uu macluumaadkan wakhti hore u gudbin waayey?
Waxana uu qoraaga buugu ku dooday in Marwan uu weerarkaasi la qorshanayey oo uu si degdeg ah oo lamafilaan ah ku ogaaday qarshaha gaar ahaan qorshahan oo looga soo sheegay magaalada London ee wadanka U.K, kadibna Marwan waxa uu si degdeg ah ula hadlay xubno ka tirsan maamulka yuhuuda hayadahooda sirdoonka ee Mossad.
Qoraagani waxa uu halkaa shaki ku geliyey in Marwan uu daacad u ahaa hayada sirdoonka ee Mossad, sababta oo ah waxa uu aaminsanaa in Masar laf’ahaanteeda uu aaminsanaa taasina ay sabab u ahayd in uu wakhti danbe ogaysiiyo in weerar kusoo fooleeyahay Isreal.
Waxa kale oo uu qoraagu ku dooday in sirdoonka masaaridu aanay aad u jeclayn inay xog muhiima siiyaan qof Marwan oo kale ah oo aad ugu dhowaa maaulka sababtoo ah Marwaan waxa sodog u ahaa madaxwenihii hore ee Masar JAMAL ABDINASIR , iyagoo ka cabsi qabay inuu noqon karo basaas laba dal ka dhexeeya tuhuno badana ay ka haysteen inuu gudbiyo xogaha iyo xaqiiqooyinka loo dhiibo.
Sirdoonka Masar waxa inta badan ku adag inuu basaas dalkale xog u gudbinayaa ka dhex shaqeeyo maxaa yeelay waa kuwo inta badan kala shakiya lamina mid aha sirdoonka reer galbeedka oo ay ku badan yihiin basaasiinta labada wadan u dhexeeya ee loo yaqaano ‘double agent’.
Isreal marwalba waxay ogayd inuu weerar kusoo fool leeyahay laakin aanay xog ka hayn goor lasoo weerari doono, waxa kale oo ay ka war hayeen in Masar aanay awood milatery u lahayn in dagaal baaxad leh ay gasho.
Balse madaxii sirdoonka milateriga Isreal ee wakhtigaas ninka lagu magacaabo ninka lagu magacaabo ELI ZEIRA waxa uu ka shakiyey xogta sireed ee uu Marwan soo gudbiyey laakiin waxa uu isku qanciyey in awooda ciidankiisu ay ku filan tahay, laakiin agaasimaha hayada mukhaabaraadka ee Mossad ayaa aad ugu kalsoonaaa maadaama xogo badan oo uu hore u keenay lagu guulaystay in laga hortago,waxa khasab noqotay in xogtaasi la qaato lana dabakho taasoo keenaytay in Yuhuudu guulaysato.
Ashraf Marwan wuxuu ahaa basaas aan macquul ahayn oo aad u da’yaraa oo dhalinyaro ahaa ,xaaskiisuna waxay ahayd inan uu dhalay madaxweyne JAMAL ABDI NASSER oo ahaa madaxweynihii dalka Masar, Ashraf weliba wuxu ka shaqeeyey xafiiska madaxtooyada.
Ma jirin sabab muuqata oo uu Ashraf Marwan ku iibiyo sirta wadankiisa, Marwan waxa uu ku dhiiraday inuu lacag qaato iibiyona sirta si uu uga horyimaado sodogii oo weli aan aaminin kana shaki qabay.
Waxa la xasuustaa in hawsha basaasnimo ee uu yuhuuda u hayey ay bilaabantay sanadkii 1970, markii looga yeedhay safaarada yuhudu ay kulahayd caasimada London ee dalka U.K kadibna laga dalbaday inuu siro aad culus oo Masar leedahay uu ka iibiyo, waxana Isreal ay ku qaadatay mudo dheer inay iska hubiyaan inuu yahay basaas masar soo laftigeedu soo dirsatay, balse markii ay hubiyeen in macluumaadka uu keenay ay run yihiin, waxay bilaabeen inay si rasmi ah u aaminaan waxaana uu yuhuuda u shaqaynayey mudo kabadan 30 sano sanadkii 1970 ilaa 1998 dii.
Xusuusta ugu weyn ee la ilaawi Karin waxay ahayd dagaalkii YOM KIPPUR oo Isreal ay ugu abaal guday inay siiso $ 100,000, maadaama oo uu badbabaadiyey askarta wadankooda iyo dalkoodaba kuna bedesho askarta wadankiisa difaacaysay
Basaaskii reer Masar ee badbaadiyey Yuhuuda